घातक बन्दै विषादी आयात, नियन्त्रण गर्न सरकार असफल – NewsAgro.com
January 8, 2018 January 9, 2018 newsagro0Comments इलाम, काभ्रे, कृषि पाठशाला, कैलाली र स्याङ्जा, घातक बन्दै विषादी आयात, चितवन र बर्दिया, जुम्ला, झापा, डँडेल्धुरा, तनहुँ, धादिङ, नवलपरासी, नियन्त्रण गर्न सरकार असफल, बाँके, बारा, बिषादी Pesticide, मुस्ताङ, मोरङ, राष्ट्रिय एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आईपीएम), विषादी, संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)
काठमाडौं, २४ पुस । वालीनालीमा अनियन्त्रित रुपमा प्रयोग हुने विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्न दातृ निकायको सहयोगमा सरकारले ४६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर पनि बिषादीको प्रयोग न्युन हुनुका साथै आयात दर झनै डरलाग्दो रुपमा भइरहेको छ । खाद्यान्न र तरकारीखेतीमा प्रयोग गर्न वार्षिक ७० करोड रुपैयाँको विषादी आयात हुने गरेको छ।
विषादी नियन्त्रणको नाममा एकातिर ४६ करोड खर्च भएको छ भने अर्कोतर्फ आयातको नाममा वार्षिक ७० करोड विदेशिएको छ । यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, विषादी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा असफल बनेको छ ।
सरकारले कृषि पाठशालामार्फत बर्सेनि करोडौं रकम खर्चेर मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीको प्रयोग घटाउँदै लैजान अभियान चलाइरेकै समयमा आयात बढिरहेको छ।
‘यो तथ्यांकले विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ’, वातावरण तथा विषादी विज्ञ डा. भुपेन्द्र देवकोटाले भने,‘किसान आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सचेत र इमान्दार नभएका कारण विषादी प्रयोग पछिल्ला वर्ष बढ्दै गएको छ।’ बर्सेनि आयात र प्रयोग बढ्दै जानुले विषादी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम असफल भएको पुष्टि हुन्छ।
उनका अनुसार आईपीएम कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि किसान र सरकारी निकायमा इमान्दारिताको अभाव हुँदा विषादीको प्रयोग घट्न नसकेको हो। किसान स्वास्थ्यप्रति सचेत भएर आफ्नै प्रयोजनका लागि विषादी नभएको तरकारी उत्पादन गर्दैआएका छन् तर आमउपभोक्ताका लागि विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएको अध्ययनको क्रममा भेटिएको डा. देवकोटाले भने।
नेपालमा पहिलो पटक सन् १९५२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक मलेरिया प्रकोप नियन्त्रणका नाममा आधिकारिक रूपमा डीडीटी भन्ने विषादी आयात गरेको थियो। त्यसपछि नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न महामारी रोग नियन्त्रण गर्न र खेतीमा लाग्ने कीरा नियन्त्रण गर्न विषादी आयात हुन थालेको हो।
जहाँ कार्यक्रम त्यही बढ्दो विषादीको प्रयोग
नर्वे सरकारको करिब ४५ करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोग र संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्राविधिक सहयोगमा २०६० देखि २०७० सम्म झापा, इलाम, काभ्रे, बारा, मुस्ताङ, नवलपरासी, जुम्ला, बाँके, डडेल्धुरा, कैलाली र स्याङ्जा जिल्लामा आईपीएम कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।
अहिले बाली संरक्षण निर्देशनालयले आफ्नै खर्चबाट बर्सेनि वार्षिक २५ लाख खर्च गरेर धादिङ, तनहुँ, मोरङ, चितवन र बर्दियामा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यही जिल्लामा अहिले पनि सबैभन्दा बढी परिमाणमा विषादीको प्रयोग भइरहेको छ।
यसरी करोडौं रुपैयाँ नियन्त्रणका नाममा खर्च भइसक्दा पनि विषादी आयात बढ्दै गएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको पाँच लाख ७४ हजार ६० किलो विभिन्न प्रकारका विषादी आयात भएको छ। आव २०७१र७२ मा ६४ करोड ६१ लाखको पाँच लाख ४९ हजार नौ सय ६५ किलो विषादी आयात भएको थियो।
विषादीले मानवदेखि पशुपन्छी र वातावरण जोखिममा
नेपालमा सबैभन्दा बढी तरकारीमा विषादीको प्रयोग हुँदै आएको छ। प्रतिहेक्टरमा एक हजार ६ सय पाँच ग्राम विषादी तरकारीमा प्रयोग हुन्छ। निर्देशनालयका अनुसार आयात हुने विषादीमध्ये ९५ प्रतिशत तरकारीमा प्रयोग भइरहेको छ। आयात हुने कुल विषादीको परिमाणमध्ये ८५ प्रतिशत विषादी बारा, काभ्रे र धादिङका किसानले तरकारीमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। ‘अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष तीन सय ९६ ग्राम खास विषको प्रयोग भए पनि कुल विषादीमध्ये ८५ प्रतिशत तरकारीबालीमै प्रयोग भएको पाइन्छु, निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्र्देशक अच्युतप्रसाद ढकालले भने।
← मेथी खेती गर्ने तरिका उपायसहित
किसानका छोरा अम्बरले बनाए कृषि यन्त्र →